Max von Sydow ọnwụ - egwuri Jesus na George Stevens nwoke si Nazareth
The film bụ ndị kasị oké ọnụ Bible nkiri mgbe emepụta.
Hollywood ọrụ anya n'etiti afọ 60 mgbe Max von Sydow kwetara na-egwu ọrụ nke Jesus na George Stevens nwoke si Nazaret.
Max von Sydow mara maka ọrụ na fim dị ka Ingmar Bergman si " The Seventh Akara ", " The emigrants " na egwu film " The Exorcist ."
O nwere a siri ike nkedo n'azụ ya na otu onye nke ikpeazụ ọrụ, o jere ozi na " Game nke n'ocheeze " dị ka Atọ-eyed Raven na " Star Wars: The Force na-akpọte " dị ka Lor San Tekka.
Hollywood ọrụ anya n'etiti afọ 60 mgbe Max von Sydow kwetara na-egwu ọrụ nke Jesus na George Stevens ' The nwoke si Nazareth . "
The film bụ ndị kasị oké ọnụ Bible nkiri mgbe emepụta. Ọ bụ ezie na ọ flopped ma na-ege ntị na-akatọ na-nominated n'ihi na ise Oscars ma merie onye ọ bụla.
Dịghị mgbe ihe Oscar
Max von Sydow dịtụbeghị mgbe o nyere Oscar na film ụwa - na ọ nọ nnọọ na-nominated ugboro abụọ.
Ọ bụ 90 afọ.
Vecka 29, söndag 25 juli 2021 kl. 11:19